लगानीमैत्री वातावरण आवश्यक | गणतन्त्र राष्ट्रिय दैनिक
लगानीमैत्री वातावरण आवश्यक
| 193 Views | Published Date : 23rd March 2018 |
२०३५ चैत्र ११ गते बुबा स्व. कोमानन्द जोशी र आमा झग्गी जोशीको कोखबाट घरको कान्छो छोराकारुपमा जन्मिनु भएका वसन्त जोशी दाङमा चल्तापूर्जा व्यवसायी हुनुहुन्छ । श्रीमती र एक छोरा र छोरीको साथमा घोराहीमा सप्तरंगी डिजिटल कलर ल्याव सञ्चालन गरेर बस्नु भएका जोशी दाङ जिल्ला उवासंघको उद्योग उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ । कार्यसमिति सदस्य हुँदै उपाध्यक्ष बन्नु भएका जोशीले यतिबेला संघको कार्यवाहक अध्यक्षकारुपमा समेत आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गरिरहनुभएको छ ।
प्रस्तुत छ, जोशीसँग विभिन्न विषयमा आधारित रहेर गरिएको कुराकानीको सारसंक्षेप । (सम्पादक)
– हाल संघकै काममा व्यस्त छु । खासगरी संघका अध्यक्ष नारायण भुसाल बाहिर जानु भएको छ । त्यसैले कार्यवाहक अध्यक्षकारुपमा संघकै काममा बढि इंगेज छु ।
२) महोत्सव भर्खरै सम्पन्न भएको छ । महोत्सव कति उपलव्धि मुलक भयो ?
– संघको हिसाबले भन्नु पर्दा महोत्सव उपलव्धि मुलक नै भएको छ । हामीले पर्यटन, कृषि, उद्योग, जडिबुटि, स्थानीय उत्पादनलाई प्रवधन गर्ने उद्देश्यले लगाएको महोत्सव पूर्णरुपले सफल भएको छ । कला, संस्कृति, साहित्य, मनोरञ्जनका कुराहरु पनि महोत्सवमा प्राथमिकतामा परेका थिए । समग्रमा भन्नुपर्दा महोत्सव उपलव्धि मुलक भएको ठहर
हाम्रो छ ।
३) कहिलेसम्म आउँछ महोत्सवको आयव्य ?
– यतिबेला हरहिसाब भइरहेको छ । लिने दिने कुराहरुलाई मिलाउने तर्फ कोषाध्यक्ष लागि
रहनुभएको छ । अब केही दिनभित्रै महोत्सवको आयव्य सार्वजनिक गर्नेछौं ।
४) यहाँहरु औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने भनेर लागि पर्नु भएको छ । कहाँसम्म पुग्यो यो यात्रा ?
–हामीले घोराही उपमहानगरपालिकाको वडा नम्वर ३ र ५ मा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने भनेर विगत देखि नै तयारी गरेका हौं । त्यहाँ ५ सय ५० विगाह जमीन खोज्ने काम पनि भएको छ । सकेसम्म अरु पनि जग्गा बढाउने पक्षमा हामी छौं । घोराही उपमहानगरपालिकाले पनि यो
कुरालाई उच्च प्राथमिकता दिएको छ । मन्त्रालय, सम्बन्धित निकायहरुले पनि दाङमा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने सवालमा उच्च चाँसो दिएका छन् ।
५) वहुउद्देश्यीय सभागृह निर्माणको कुरा कहाँ पुग्यो ?
– सभागृह निर्माण कार्य अगाडी बढेको छ । टेन्डर समेत भइसकेको छ । अबको केही वर्षभित्रै दङालीले सभागृह पाउनेछन् ।
६) यहाँहरु व्यापारिको हकहितको लागि मात्र बोल्नु हुन्छ तर बजार व्यवस्थापन, फोहोर व्यवस्थापनका लागि व्यापारीहरुलाई उत्तरदायी बनाउने सवालमा के गरिरहनु भएको छ ?
– हामी व्यवसायीहरुको हकहितका लागि काम गर्ने संस्था हौ । तर यसका अलावा पनि हामीले बजार व्यवस्थापन, फोहोर व्यवस्थापनका लागि व्यवसायीहरुलाई जिम्मेवार बनाउने ढंगबाट विभिन्न सचेतनामुलक कार्यहरु गरिरहेका छौं । पहिलेको तुलनामा बजार समेत सुन्दर भएको छ । मेन रोडतिर भने निर्माण कार्य भइरहेको र एकदमै सुस्त गतिमा अगाडी बढेकाले त्यहाँ अस्तव्यस्तता कायम छ । हामी स्थानीय निकाय, सम्बन्धित निमार्ण कम्पनी, सडक विभागलाई यस विषयमा गम्भीर बन्न आग्रह
७) संघले अन्य गतिविधिहरु के गरिरहेको छ ?
– हामीले व्यवसायीहरुलाई प्यान, भ्याटको विषयमा सचेत बनाउन, राजश्व बुझाउनका लागि आन्तरिक
राजश्व कार्यालय, नगरपालिकासँग समन्वय गरी संघमै शिविर सञ्चालन गरेका थियौं । आउँदा दिनहरुमा पनि यस प्रकारको कार्य गर्ने सोँच बनाएका छौं । संघको सदस्यता नवीकरण, नयाँ सदस्य वितरणका लागि पनि हामीले विभिन्न अभियानहरु चलाएका
छौं । जसमा अत्यधिक व्यवसायीहरुको सहभागिता पनि देखियो ।
८) यहाँ संघको उद्योग उपाध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ । के गर्दा दाङमा उद्योग, कलकारखानाहरु फस्टाउन सक्छन् ?
–सर्वप्रथम त उद्योगमैत्री वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ । लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्दै राज्यको पक्षबाट उद्योगको विकासका लागि ठोस नीति, नियम, कार्यक्रम पनि बनाउनुपर्छ । करमा विशेष छुट, आर्थिक सहयोग, बिजुलीबत्तीको पर्याप्ततामा ध्यान दिनुपर्छ ।
९) पछिल्लो समयमा घरभाडा सम्बन्धी समस्याहरुबाट व्यवसायी पीडित छन् नी !
–घरभाडा समस्या बास्तबमै सबैका लागि छ । यस विषयमा स्थानीय निकाय र हामी मिलेर घरभाडा सम्बन्धी नीति, नियम बनाउने सोँचमा छौं ।
१०) घोराहीमा हुन लागि रहेको महायज्ञको यहाँहरुले बिरोध गर्नुको कारण !
–हामी धर्मको विरोधी होइनौं । खाली धर्मलाई व्यापारिकरण गर्न खोजिएको होकी, त्यसमा पनि आर्थिक संकलन गरी व्यक्तिगत स्वार्थ पुरा गर्न खोजिएको छकी भनेर गुनासो आएपछि हामीले सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराएका हौं । सुरुमा प्रचारमा आउँदा उक्त यज्ञ व्यक्ति विशेषले लगाउन खोजिएको थियो । जसले गर्दा हामीलाई शंका लाग्यो । तर पछिल्लो समयमा कुनै संस्थाले त्यसको नेतृत्व गर्न खाजेको छ भन्ने सुन्यौं, यसमा हामीलाई धेरै कुरा भन्नु छैन, खाली यति होकी भवन निर्माण गर्ने उद्देश्यले महायज्ञ गर्न लागि रहेको छ भनेर भनिएको
असन्तुष्टिका बीचमा हुन लागि रहेको कार्य कसरी पूर्णरुपले सफल हुन सक्छ ? अन्यौलता कायमै भएकाले भवन निर्माणका लागि चाहिने जति रकम सम्भवत त्यसबाट उठ्दैन र बच्दैन पनि । यज्ञमा लाग्ने खर्च समेत नउठ्ने भयो भने आयोजक संस्था उल्टै घाटामा जान सक्छ । यस विषयमा आयोजक संस्था सजग हुन जरुरी छ । अहिलेलाई यति मात्र भनौं ।
११) अन्तमा केही भन्नुछकी ?
– लोकप्रिय पत्रिकामा संघको तर्फबाट विचार सम्प्रेषण गर्ने मौका दिनुभएकोमा धन्यवाद छ ।